ရောင်​နီဦး: ဆယ်ကျော်သက်များရဲ့ ဘုံရန်သူ ( သို့မဟုတ် ) ဝက်ခြံ
ဝက်ခြံအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် ငယ်ဘဝက စပြီးပြောရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော့်မှာ အကိုဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက် ၂နှစ်ကြီးတယ်။ သူ လူပျိုဖြစ်ခါစမှာ သူ့မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံတွေ စထွက်လာတယ်ဗျ။
ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးလဲဆိုရင် သူ့မျက်နှာက နာနတ်သီးကို စက်သေနတ်နဲ့ပစ်ထားသလိုကို ဖြစ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူ့ကြည့်ပြီး တော်တော်လန့်သွားခဲ့တာ။ နဂိုကမှ သူ့ကြည့်ပြီး စိတ်ညစ်နေရတဲ့အထဲ သူ့ပြောစကားကြောင့် ပိုပြီးစိတ်ညစ်သွားရပါတယ်။
ပြောပုံကိုလဲ ကြည့်အုံး " ညီလေးတဲ့..မင်းလဲ နောက်အကို့လိုမျိုး ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာတဲ့ " ..သေရောပဲ။ "ဟာ မဖြစ်လို့ မရဘူးလား" ဆိုပြီး အထွန့်တက်ကြည့်သေးတယ်။ သူက နဲနဲမှကို မလျှော့တာ။ "ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာ မင်းမယုံရင် စောင့်ကြည့်ပေါ့" တဲ့။ ကဲ ..ထားပါတော့ ....
ဒါက ဝက်ခြံဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော် စပြီး ရင်းနှီးခဲ့တာပေါ့။ နောက်ပိုင်း သူ့ကို နဲနဲ မေ့သွားတယ်ဗျ။ သူက နဲနဲတော့ မာယာများသဗျ။ ကျွန်တော် ၁၀တန်းဖြေပြီးတဲ့ အချိန်ထိကို သူက ပေါ်မလာသေးဘူးဗျ။အဲဘယ်အချိန်မှာပေါ်လာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒုတိယနှစ်ရောက်တဲ့
အချိန်မှာ စတွေ့တော့တာပါပဲ။ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာ တော်တော် စိတ်အနှောင့်အယှက် ပေးသဗျ။ ပေါက်မယ့်ပေါက်တော့လဲ တကယ့်ကို အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဆိုတာမျိုး ပေါက်တာလေ။ ဆေးပေါင်းစုံသုံး မဖြုံဘူးဗျ။ ဝက်ခြံပေါက်တာများ ဆန်းလားကွာ..စကားလုပ်ပြောနေ
ရသလား ဆိုပြီး အပြစ်တင်မစောစေချင်ဘူးဗျ။ အရေးပါတာပေါ့ဗျာ။ ဘာလို့ဆို ဝက်ခြံတွေ အများဆုံး ဒုက္ခပေးခြင်းခံရတာ လူငယ်လေးတွေလေ။ လူငယ်မှ အညွန့်တလူလူနဲ့လူငယ်လေးတွေလေ။ ဆက်ရှင်းရအောင်..ဝက်ခြံကြောင့် လူငယ်တွေကို ဘာတွေများ ထိခိုက်သွား
စေလို့လဲ ?? အရေးအကြီးဆုံး ထိခိုက်မှုက Self Confidence လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာတယ်။ မပြောရဲ မဆိုရဲလေးတွေ၊ မလုပ်ရဲ မကိုင်ရဲလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ တချို့ဆို Depression လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်
ကျရောဂါ အနုစားလေးတွေတောင် ဖြစ်တတ်ကြတယ်လို့ ဝက်ခြံနဲ့ ပတ်သက်သော စစ်တမ်းတွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတွေပေါ့။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲ သူက ကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခပေးပါတယ်။ နုပျိုလန်းဆန်းနေရမယ့် အရွယ်မှာ ဝက်ခြံဆိုတာ
ကြီးကြောင့် အပြည့်အဝ မလန်းဆန်းခဲ့ကြရတဲ့ လူငယ်လေးတွေ အများကြီးရှိခဲ့တာပေါ့။ အဲလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက် ကျွန်တော် အခု ဝက်ခြံဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆေးပညာနဲ့ ယှဉ်ပြီးနဲနဲပြောပြပါ့မယ်။
ဝက်ခြံဆိုတာ ဘာလဲ ??
ပထမဆုံး ဝက်ခြံဆိုတာကို ရင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင် သူဘာဆိုတာကို အရင် သိထားသင့်တာပေါ့။ ဝက်ခြံ ( Acne ) ဆိုတာ အရေပြားမှာဖြစ်သော ရောင်ရမ်းနာ လို့ပဲ အလွယ်ပြောကြပါစို့။ ဝက်ခြံမှာ အကြမ်းအားဖြင့် ၂မျိုးရှိပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်မှာအဖြစ်များတဲ့ ဝက်ခြံ
( Acne Vulgaris ) အဖြစ်အများဆုံးပေါ့ဗျာ။ နောက် အသက် ၃၀ကျော်တွေမှာ ပေါက်တတ်သော နာတာရှည် ဝက်ခြံ ( Acne Rosacea ) ဆိုတာလဲ ရှိပါသေးတယ်။ အခုကတော့ ပထမ ဝက်ခြံအမျိုးအစားကိုပဲ အဓိကထား ပြောပါ့မယ်။ သူ့မှာ အရောင် ၃မျိုးရှိသဗျ။ အဖြူ၊
အနက်၊ အနီ ပေါ့။ အဖြူကတော့ မွေးညင်းအိတ်ပိတ်နေရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ပွင့်နေရင်တော့ အနက်ပေါ့။ အဲဒီ့မှာမှ ဘက်တီးရီးယားကြောင့် ရောင်ရမ်းနေမယ်ဆိုရင် အနီပေါ့။
ဝက်ခြံမှာ အဆင့် ၄ဆင့်ရှိပါတယ်။
(၁) စဖြစ်တဲ့ အဆင့် နီမယ်၊ နာမယ် Acne Pimple
(၂) နီပြီး ဖေါင်းလာမယ် Red bump
(၃) ပြည်တည်လာမယ် Acne Pustule
(၄) အိတ်တခုလို ပိုကြီးလာမယ် Acne Cyst ။
ဝက်ခြံကို အဓိကဖြစ်စေတာက အရေပြားပေါ်မှာ ရှိတဲ့ မွေးညင်းအိတ်၊ ချွေးထွက်အိတ်နဲ့ မွေးညင်းတို့ ၃မျိုးက အဓိက ပါဝင်ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာ Androgen မည်သော ဟော်မုန်းတစ်မျိုး စထွက်ပါတယ်။ သူ့ကြောင့် မွေးညင်းအိတ်မှ အဆီများပိုထွက်စေပါတယ်။ အသားအရေကို စိုစွတ်စေပါတယ်။ မျက်နှာ အဆီပြန်လာစေပါတယ်။ ချွေးထွက်အိတ်မှ ချွေးနဲ့အတူ အညစ်အကြေးတွေပါရောပြီး
ထွက်ပါတယ်။ မွေးညင်းပေါက်ကျဉ်းပြီးပိတ်တာက ဝက်ခြံကို စတင် ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ P.acne ဆိုသော ဘက်တီးရီးယားက ဝက်ခြံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအားနဲတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်များမှာ ပိုမိုဆိုးဆိုးရွားရွားဖြစ်စေပါတယ်။
အဓိက အချက် (၃) ချက်ရှိပါတယ်။
(၂) အညစ်အကြေးများ၊ ဆဲလ်အသေများ၊ ပိုလျှံအဆီများ စသည်တို့ကြောင့် မွေးညင်းပေါက်ကျဉ်းလာခြင်း၊ ကျဉ်းရာမှ ပိတ်သွားခြင်း
(၃) ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။
နောက်ပြီး ဝက်ခြံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသော အချက် (၄)ချက်ထပ်ရှိပါတယ်။
(၁) Androgen ဟောမုန်း အထွက်များခြင်း
(၂) အချို့သော ဆေးဝါးများ (ဥပမာ စတီးရွိုက်၊ လစ်သီယံ ပါဝင်သော ဆေးဝါးများ )
(၃) အစားအသောက် အနေနဲ့ နို့နှင့်နို့ထွက် စားသောက်ကုန်များ၊ ချောကလက်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ
(၄) တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု နည်းပါးခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဝက်ခြံဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါသေးတယ်။ Stress များခြင်းကြောင့် ဝက်ခြံကို မဖြစ်စေနိုင်ပါ။ သို့သော် ရှိပြီးသား ဝက်ခြံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။
ဝက်ခြံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များ
(၁) တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုကို ဂရုစိုက်ပါ။ အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊ လက်သည်း၊ လက်ဖဝါး။
(၂) ဝက်ခြံပေါက်နေသောနေရာကို သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ၊ သို့သော် မျက်နှာ ခဏခဏသစ်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ မျက်နှာ အသစ်လွန်ခြင်းကြောင့် အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေတဲ့အပြင် ဝက်ခြံကို သွားဆွနေသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
(၃) မသန့်ရှင်းသော ပစ္စည်းများ ဥပမာ လက်ကိုင်ဖုန်း၊ မျက်နှာကို တိုက်ရိုက်မထိမိစေရန် သတိထားပါ
(၄) မိန်းကလေးများ အနေဖြင့် အလှကုန်ပစ္စည်းများ သုံးရာတွင် အဆီပြန်စေသော၊ အဆီပါသော မိတ်ကပ်၊ နေလောင်ခံ ကရင်မ်၊ ခေါင်းလိမ်း ဂျဲလ်၊ ကရင်မ် စသည်တို့ကို ရှောင်ကျဉ်သင့်ပါတယ်၊
"water-based" or "noncomedogenic" စာတမ်းပါ အလှကုန်ပစ္စည်းများကို ရွေးချယ် ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။ မိတ်ကပ် ထူထူလိမ်းခြင်းကို ရှောင်ပါ။ ညအိပ်ရာမဝင်ခင် သေချာ ပြန်ဖျက်ပါ။
(၅) ပူပြင်းသော နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။
(၆) ဝက်ခြံကို ကုတ်ခြင်း၊ ညှစ်ခြင်း လုံးဝရှောင်ကျဉ်ရပါ့မယ်။ ပိုးဝင်စေနိုင်သလို အမာရွတ်ထင်ကျန်နိုင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
(၇) အိပ်ရေး ပျက်ခြင်း၊ စိတ်ဖိဆီးမှုများခြင်းဟာ ဝက်ခြံကို ပိုမိုဆိုးရွားစေတဲ့အတွက် အိပ်ရေးဝဝ အိပ်ပါ။ ပျော်ပျော်နေပါ။
(၈) အပူအစပ်၊ အဆီ အစိမ့် လွန်ကဲစွာ စားသောက်ခြင်း ရှောင်ကျဉ်ပါ။
(၉) ရေများများ သောက်ပါ။
ဝက်ခြံကို ပျောက်ကင်းစေဖို့အတွက် အဆင့်အလိုက် ကုသမှုပုံစံကွဲပြားသွားသလို၊ အမျိုးအစား အလိုက်၊ အနဲအများ အလိုက်၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ တုံ့ပြန်မှုအလိုက် ကုသမှုပုံစံများကွဲပြားပါတယ်။
သာမန် ဝက်ခြံများ အတွက်OTC (Over-the-counter topical treatments) ဘမ်ဇိုင်းပါအောက်ဆိုက် (benzoyl peroxide) စလီဆလစ် အက်ဆစ် (salicylic acid) ဆာလ်ဖာ (sulfur) ပါဝင်သော လိမ်းဆေးကို လိမ်းသင့်ပါတယ်။
ပြည်တည်နေသော ဝက်ခြံများ အတွက် Clindamycin Phosphate ပါဝင်သော လိမ်းဆေးများကို တနေ့၂ကြိမ် လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုဆိုးရွားသော ဝက်ခြံများ နှင့် ဝက်ခြံ အရေအိတ်များ အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက် ရယူသင့်ပါတယ်။
အခြားသော ဝက်ခြံကို သက်သာစေသော အရာများမှာ Tea tree oil ပါဝင်သော Facial Foam စသည်၊ စပျစ်သီး၊ ကြံ၊ ပန်းသီး၊ စသည်တို့ဟာ ဝက်ခြံကို သက်သာစေပါတယ်။့
ဝက်ခြံဆိုတာ ပေါက်သင့်တဲ့အရွယ်မှာ ပေါက်ပြီး ပျောက်သင့်တဲ့ အရွယ်မှာ ပျောက်ရပါမယ်။ အထက်ပါနည်းလမ်းများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာမယ် ကျင့်သုံးမယ် ဆိုရင် ဝက်ခြံဆိုတာကို ကြောက်နေဖို့မလိုတဲ့အကြောင်း ပြောပရစေ။
ဝက်ခြံကင်းစင်တဲ့ မျက်နှာလေးများကို ပိုင်ဆိုင်စေလိုသော ဆန္ဒဖြင့် ယခု ပို့စ်ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
Posted by YaungNiOo at 7:50 PM